တားမြစ်ထားသောပေါင်းစည်းမှုများ Timecode Buddy ကို MovieSlate မှ iOS App မှတစ်ဆင့် Forscene ပလက်ဖောင်းအတွင်းသို့ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » တားမြစ်ထား Integrated Timecode လုပ်ပြီး Buddy ထဲသို့ Forscene ပလက်ဖောင်းမှတဆင့် MovieSlate ကို iOS App ကို
လန်ဒန် - သြဂုတ် 26, 2014 - တားမြစ်ထား Technologies က Plc (AIM: FBT), စျေးကွက်-ဦးဆောင်သောမိုဃ်းတိမ်ကိုဗီဒီယိုပလက်ဖောင်းများ၏ AIM-ကိုးကားပိုင်ရှင်နှင့် developer Forsceneဒီနေ့ကပေါင်းစည်းမူကြောင်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာ Forscene Timecode စနစ်များလီမိတက်ရဲ့ Timecode လုပ်ပြီး Buddy အတူ MovieSlate ကို iOS application ကိုမှတဆင့်။ MovieSlate ထုတ်လုပ်မှု slates များအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှင့် Timecode လုပ်ပြီး Buddy စနစ်အသုံးပြုသူများယုံကြည်စိတ်ချရသောနဲ့အလွယ်တကူ generate ပေးနိုင်ပါတယ်, ထပ်တူပြုခြင်းနှင့် RF သို့မဟုတ် Wi-Fi ကွန်ယက်ကျော်ကြိုးမဲ့တိကျ timecodes နှင့် metadata မျှဝေပါ။ အဆိုပါပေါင်းစည်းမှုလူသစ်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်တည်းဖြတ်မှုစနစ်သို့ metadata ကိုမှတ်စုနှင့်မီဒီယာထည့်သွင်းခွင့်ပြုပါရန်သုံးနည်းပညာများအတူတူတတ်၏။
"ကျနော်တို့ကအမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အချိန်နှင့်ပိုက်ဆံကယ်တင်နိုင်ရန်အတွက်၎င်းတို့၏အများဆုံးမလဲပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ကူညီသက်သေနည်းပညာများနှင့်အတူပေါင်းစပ်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဤသည်ပေါင်းစည်းမှုအတွက်အရေးကြီးသော metadata ကိုဖမ်းယူမသာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကူညီပေးနေ, ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာ၏အစအဦးမှာကွာဟမှုဖြည် Forscene ထုတ်လုပ်မှု၏အလွန်စတင်ချိန် မှစ. , ဒါပေမယ့်လည်း metadata ကိုအဆိုပါလုပ်ငန်းအသွားအလာတလျှောက်လုံးညှိခြင်းနှင့်ရှာဖွေနေပါသည်သေချာအောင် "Greg Hirst, Technologies က plc တားမြစ်ထားစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဒါရိုက်တာကပြောသည်။ "Timecode လုပ်ပြီး Buddy ဟာတစ်အစွမ်းထက်တိုးမြှင့်ဖြစ်ပါတယ် Forscene တိုက်ရိုက်ထဲသို့ရိုက်ကူးအပေါ် created ရိုက်ချက်မှတ်စုတင်သွင်းဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေစေသည်ပလက်ဖောင်း Forscene အလိုအလျှောက်မီဒီယာမှပြန်ဆက်သွယ်တဲ့လမ်းအတွက် - ။ တစ်ပိုမြန်ပိုထိရောက် post ကိုလုပ်ငန်းစဉ်များတဲ့အင်္ဂါရပ် "
အဆိုပါ Timecode Sync ကို plugin ကိုအတူ, MovieSlate အသုံးပြုသူများကိုမြှင့်တင်နိုင် SMPTE အဆိုပါအလွန်တိကျမှန်ကန် Timecode လုပ်ပြီး Buddy system ထဲကနေ, အစစ်အမှန်အချိန်အတွက် Wi-Fi ကိုကျော်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရဲ့ timecode ။ ဤသည်မှာရိုက်ကူးမှတ်တမ်းသတင်းအချက်အလက်် MovieSlate မှတ်စုမီဒီယာကိုယ်တိုင်ကကဲ့သို့တူညီသော timecode ကိုးကားဆိုလိုသည်။ ၏ရလဒ်အဖြစ် Forscene သူတို့သို့တင်သွင်းနေသည့်အခါပေါင်းစည်းမှုသည် MovieSlate ရိုက်ကူးမှတ်စုထို့နောက်အလိုအလျောက်မီဒီယာမှပြန်လင့်ထားသည် Forscene။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုထုတ်လုပ်သူများအတွက်အလုပ်စတင်ကြောင်းသေချာ Forscene ပြီးသားအသေးစိတ်မှတ်တမ်းများတည်ဆောက်ရန်ရာမှအချို့အခြေခံမှတ်စုရှိသည်။ အားလုံးအချက်အလက်များကိုတစ်လျှောက်လုံးပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါသည် Forscene အစာရှောင်ခြင်းစုဝေးတည်းဖြတ်ရေးဘို့ခွင့်ပြုရှာဖွေ metadata ကိုအဖြစ်လုပ်ငန်းအသွားအလာ။
အတူပေါင်းစည်းမှု Forscene တစ်ဦး crossplatform တည်းဖြတ်ရေးဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့ Timecode လုပ်ပြီး Buddy ရဲ့ပထမဦးဆုံးပေါင်းစည်းမှုဖြစ်ပါတယ်။
"Timecode စနစ်များအမြဲပူးပေါင်းစက်မှုလုပ်ငန်း၏ သာ. ကောင်းသောတိုးဖို့သာစစ်မှန်တဲ့လမ်းကြောင်းယုံကြည်သည်သိရသည်။ တစ်နေ့တဦးတည်းအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းထုတ်လုပ်မှုအဆက်အသွယ်သူတို့ဘုံ interfaces နှင့်အတူအတူတကွအလုပ်လုပ်ဖို့ပိုထုတ်လုပ်သူများနှင့် developer များလိုအပ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြခဲ့ကြ "ဟုပေါလု Scurrell, မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ, Timecode စနစ်များလီမိတက်ကဆိုသည်။ ဒါကြောင့်တဦးတည်းခြေလှမ်းနီးကပ်လာ, တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်ကိုပိုမိုအကျိုးရှိစွာနှင့်ကြော့လမ်းများကို log, နဲ့ content ကိုခြေရာခံဖို့ Third-party ကုမ္ပဏီများနှင့်အတူတကွနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကိုဆောင်ခဲ့၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့မစ်ရှင်မှကျွန်တော်တို့ကိုယူသောကြောင့်, "ဒီပေါင်းစည်းမှု Timecode လုပ်ပြီး Buddy ရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ Forscene ပြီးသားကျယ်ပြန့်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပြီးဆုံးပြီးနောက်အကဲဖြတ်ထုတ်လုပ်မှု Workflows အတွက်မွေးစား, ဒါကြောင့်ပေါင်းစည်းဖို့ရာနဲ့စံပြပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ "
အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက Forscene www မှာတှေ့နိုငျပါသညျ။forscene.co.uk ။ တားမြစ်ထားအကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက www.forbidden.co.uk မှာတှေ့နိုငျပါသညျ။
Timecode စနစ်များလီမိတက်ဒီနေ့ရဲ့ပစ်ခတ်မှုလေ့အကျင့်များနှင့်အသံဖမ်းပုံစံများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖြည့်ဆည်းကြောင်း timecode ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်တယ်။ ဧပြီလ 2012 အတွက်ဖြန့်ချိခြင်း, Timecode လုပ်ပြီး Buddy system ကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းက Wi-Fi ကို အသုံးပြု. အိုင်ပက်မှ timecode နှင့် metadata ထုတ်လွှင့်နေတုန်းလိုင်စင်အခမဲ့ RF လိုင်းများအပေါ်အလွန်အမင်းတိကျ timecode နှင့် metadata generate နှင့်ထပ်တူပြုခြင်းမှထုတ်ကုန်၏ပထမဦးဆုံး suite ကိုဖြစ်ပါတယ်။ Timecode လုပ်ပြီး Buddy အပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များမှာတွေ့နိုင်ပါသည် www.timecodebuddy.com.
တားမြစ်ထားတဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းပရိသတ်တွေတောင်းဆိုဖို့ဆွဲဆောင်မှုကြည့်အတွေ့အကြုံများကိုဖန်တီးဖြန့်ဝေဖို့မီဒီယာချမှတ်သူများနှင့်ထုတ်လွှင့် enable ကြောင်းအဆင့်မြင့်နည်းပညာများဖွံ့ဖြိုး။ ရဲ့တားမြစ်ထားစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ထုတ်ကုန်, Forsceneကမ္ဘာ့အများဆုံးအဆင့်မြင့် cloud-based ကိုဗီဒီယို Post-ထုတ်လုပ်မှုပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ Post-ထုတ်လုပ်မှုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များတောင်းဆိုမှုများမြန်ဆန်-ပွေးညီရှုခင်းများအတွက်မြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးပုံပြင်များစေခြင်းနှင့်ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါခွင့်ပြုပါတယ်။ , Atos, information model ရဲ့အပါအဝင် High-profile ကိုမီဒီယာနှင့်နည်းပညာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူမိတ်ဖက်, တားမြစ်, လန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်းအခြားရွေးချယ်စရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးကွက်အပေါ်ကိုးကား, deltatre EVSနှင့် Key ကို Code ကိုမီဒီယာ။ တားမြစ်ထားအကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက www.forbidden.co.uk မှာတှေ့နိုငျပါသညျ။ အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက Forscene www မှာတှေ့နိုငျပါသညျ။forscene.co.uk ။
IBC2014 မှာတားမြစ်ထားသွားရောက်ကြည့်ရှု, 8.B38e ရပ်
IBC2014 မှာ Timecode စနစ်များသွားရောက်ကြည့်ရှု, 9.B14b ရပ်
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Forbidden/Forbidden-iPadWithShoot.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: iPad ပေါ်တွင် MovieSlate
အကြောင်းအရာ တားမြစ်ထား Technologies က FORscene IBC2014 MovieSlate post ကိုထုတ်လုပ်မှု Timecode လုပ်ပြီး Buddy Timecode စနစ်များ 2014-08-28
ယခင်: လိုင်ယွန်ဗီဒီယိုအသစ်လွင်ဆုံးမိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှု Truck ကားများတွင် Calrec Apollo အသံ Console ထည့်သွင်း
နောက်တစ်ခု: သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက််ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် Multi-Screen ကိုဗီဒီယို Delivery ဘို့မဟာဗျူဟာ '' တိုင်းဖန်သားပြင်နောက်ကွယ်မှာ '' အမြော်အမြင်ကြေညာ